Kedu ihe bụ asteroids na olee otu ha si dị iche na meteorites | Netwọk Mgbasa Ozi
Eluigwe na ala bụ ihe ịtụnanya mara. Kwa ụbọchị anyị na-amụtakwu banyere ya ma anyị na-akọwasị ihe omimi nke metụtara ọrụ nke ihe niile. O doro anya na ị hụla ma ọ bụ kwuo okwu banyere ya asteroids. O nwekwara ike ịbụ na ị gharịrị ha na meteorites n'ihi na ị maghị echiche ahụ nke ọma. Asteroid abụghị ihe ọzọ karịa obere ihe e guzobere site na nkume, ọkachasị, na nke, dị ka ụwa ndị ọzọ, na-agba anyanwụ gburugburu.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ihe asteroids bụ na otu ha si dị iche na meteorites, nke a bụ ọkwa gị. Anyị ga-akọwara gị ihe niile a nke ọma.
1 Kedu ihe bụ asteroid na ụdị njirimara ọ nwere
2 Ofdị asteroids
3 Kedu ozi ewepụtara?
4 Esemokwu dị iche na meteorites
Kedu ihe bụ asteroid na ụdị njirimara ọ nwere
Dika anyi kwurula, kpakpando bu ihe ozo ma obu ihe di egwu ma obu na-agba Sun. O bu ezie na ogo ya na nke mbara uwa abughi otu, uzo ya di otu. E nwere ọtụtụ asteroids na-orbiting na anyị Usoro anyanwụ. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime ha bụ ihe anyị maara dịka eriri eriri igwe. Mpaghara a dị n’etiti ngagharị nke Mars y Jupita. Dị ka mbara ala, mbugharị ha bụ elliptical.
Achọghị ha naanị na eriri a, mana enwere ike ịchọta ha na trajectory nke mbara ala ndị ọzọ. Nke a pụtara na ihe okwute a nwere otu ụzọ n’anyanwụ, mana onweghị ihe ị ga-eche. I nwere ike iche na ọ bụrụ na kpakpando dị n’otu ebe a na-agba ya gburugburu na mbara ụwa anyị, na oge na-abịa mgbe ọ ga-adakpọ ma kpata ọdachi. Nke a adịghị ka nke a. Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe ha n’ihi na ha adịghị adọkpụkọ.
Ọsọ asteroids ndị nọ n'otu orbit dị na mbara ụwa na-agakarị otu ọsọ. Ya mere, ha agaghị ezute. Maka nke a mee, ụwa ga-eji nwayọ na-aga, ma ọ bụ asteroid ga-eme ka ọsọ ya dịkwuo elu. Nke a anaghị eme na mpụta ọ gwụla ma enwere ikike mpụga na-eme nke a. Ka ọ dị ugbu a, iwu mmegharị na-achịkwa inertia.
Asteroid a sitere na nguzobe nke Igwe. Dị ka anyị hụrụ n'isiokwu ụfọdụ, usoro mbara igwe guzobere gburugburu ijeri afọ 4.600 gara aga. Nke a mere mgbe nnukwu igwe ikuku na uzuzu dara. Ka nke a mere, ọtụtụ ihe gbadara n'etiti igwe ojii ahụ, wee mee Anyanwụ.
Ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ ghọrọ mbara ala. Agbanyeghị, ihe ndị ahụ dị na eriri kpakpando enweghị ohere ịghọ ụwa. Ebe ọ bụ na asteroids na-etolite na ebe na ọnọdụ dị iche iche, ha abụghị otu. Onye ọ bụla etolite na a dị iche iche anya site na Sun. Nke a na-eme ka ọnọdụ na mejupụtara dị iche iche dị ka nke ọma.
Anyị na-ahụ ihe ndị na-abụghị okirikiri, kama ha nwere jagged na ụdị oge ụfọdụ. A na-etolite ha site na ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu na ihe ndị ọzọ ruo mgbe ha dị otu ahụ.
Ndị ọzọ dị ọtụtụ narị kilomita n’obosara na nnukwu. Ha pere mpe, dị ka obere okwute. A na-eme ọtụtụ n'ime ha site na ụdị okwute dị iche iche. Ọtụtụ n’ime ha nwere ezigbo nickel na ígwè.
Kedu ozi ewepụtara?
Ihe ndị a nwere okwute nwere ike inye anyị ụfọdụ ozi gbasara ịmata gbasara ihe niile dị n’eluigwe. Ebe ọ bụ na ha guzobere n'otu oge dị ka ndị ọzọ nke anyanwụ, ndị a ohere nkume nwere ike inye anyị ozi banyere akụkọ ihe mere eme nke mbara ala na Sun. Ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike inyocha ndị asteroids iji nweta ihe ọmụma banyere ya.
Enweela ọtụtụ ebe ohere NASA ebe a hụlarị aststeroid. Na ụgbọ elu nke ụgbọ mmiri mkpa NEEM Shoemaker mere n'ebe Eros (aha e nyere na asteroid) ọ rutere na ya iji nweta ụfọdụ data na nhazi na nhazi nke ihe nkume. Enweela ebe ndị ọzọ na-agagharị agagharị dịka ụgbọ mmiri Dawn ịga leta eriri asteroid bụ nke a nyochara Vesta, ihe asteroid buru ibu dị ka obere mbara ala, yana ụgbọ elu OSIRIS-REX nke jerela ozi na nso nso asteroid. n’ụwa a na-akpọ Bennu na weta nlele na ụwa anyị.
Esemokwu dị iche na meteorites
Dị ka anyị kwurula na mbido isiokwu a, n'ezie ị ghahiela meteorite maka igwe ikuku. Ma ọ bụ na asteroids na nkewa dị ka ọnọdụ ha dị na Mbara Igwe. Dịka ọmụmaatụ, anyị ekwuolarịrị ndị nọ na eriri asteroid n'agbata Mars na Jupita. E nwere ndị ọzọ a na-akpọ NEA n’ihi na ha dị nso n’ụwa. Anyị na-achọtakwa Trojans, nke bụ ndị gbara ya gburugburu na Jupita.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere Centaurs. Ndị a bụ ndị nọ na mpụga nke Mbara Igwe, ime na nso Oort Cloud. N'ikpeazụ, a hapụrụ anyị na kpakpando ndị na-ekpuchi ụwa. Nke a bụ, a na-ejide “ike ndọda” site na ike ndọda na oke ụwa maka ogologo oge. Ha nwekwara ike pụọ ọzọ.
Ruo ugbu a enwere m olile anya na ihe niile dị mma. Ugbu a ọ bụ oge iji mara ihe meteorite bụ. Meteorite abụghị ihe asteroid na-akụ ụwa. Enyere aha a n'ihi na, mgbe ọ banyere na mbara igwe, ọ na-ahapụ ụzọ ọkụ a na-akpọ meteor. Ndị a bụ ndị dị egwu maka ụmụ mmadụ. Otú ọ dị, ikuku anyị na-echebe anyị pụọ n'aka ha, ebe ọ bụ na mgbe ha zutere ya, ha na-agbaze.
Dabere na ihe mejupụtara ha nwere, ha nwere ike ịbụ okwute, ọla ma ọ bụ ha abụọ. Mmetụta meteorite nwekwara ike ịdị mma, ebe enwere ike ịnweta ọtụtụ ozi gbasara ya. O nwere ike ịbụ na ọ nwere ike imebi ihe ma ọ bụrụ na o buru ibu na ikuku agaghị ebibi ya kpamkpam mgbe ha batara. Enwere ike ibu amụma nke a taa site n’ịmara ụzọ ya.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere asteroids na meteorites.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Asteroids